AASraw Anabolic steroids budada ah Hplc = 98% | AASraw
AASraw waxay bixisaa awood yar oo wax soo saarka si degdeg ah uga jawaabto baahida loo qabo tiro yar iyo baahida horumarinta koritaanka (1 ilaa 50 kg).
Xarumaha AASraw waxay ku habboon yihiin soo saarida kiimikada dhexe iyo daawooyinka firfircoon ee daawada (APIs) ee tijaabada caafimaadka,
iyo sidoo kale macaamiisha yar ee API-ga. Dhirta yar-yar ayaa ku shaqeeya sida ku cad xeerarka GMP.
Qalabka AASraw ee habka ugu habboon ee loogu talagalay qalabka baahida gaarka ah ayaa u sahlaya xarumahan inay wax ka qabtaan wax soo saarka yar-ilaa heer dhexdhexaad ah.
Hannaanka iyo wareejinta tiknoolajiyada iyo sidoo kale kor u qaadista nuujinta dhirta ballaaran ee dhirta badan.
Soo Saarida Bulshada
Iyada oo qayb ka ah adeegsiga wax soo saarka mugga ee miisaaniyadda ee AASraw iyo adeegga kobcinta, awooda ballaaran ee kartida leh waxaa la bixiyaa wax soo saarka illaa dhowr ah 100 midab sheyga iyo sanadka, tusaale ahaan 100 m3 awoodda.
Dhirta khatarta ah ee loogu talagalay:
Hydrogenation iyo falcelinta kale ee cadaadiska sare (illaa 80)
◆ Qalabka heerkulka-hooseeya (hoos u -80 ° C)
◆ Qalabaynta (1 tufsi halkii qofba)
◆ Maaddooyinka daawooyinka firfircoon ee firfircoon (GMP)
◆ Qalitaanka (ilaa heerarka 70)
◆ Qalabka heerkulka sare (illaa 250 ° C)
◆ Qalabka cadaadiska dhexdhexaadka ah ee fuuq-celinta ee illaa xaddiga kilo-mitir ee 20 ee walxaha kala go'a.
Qalabaynta & Qalitaanka
Qalabka kala-soocidda ee wax-soo-saarka yar-yar, soo-saarka kiilada iyo soo-saarka ballaadhan.
◆ Feejignaanta cadaadiska (wareegga iyo hagaajinta, qolalka nadiifka ah)
❖ Xarumaha nalalka (qolalka nadiifka ah)
◆ Qalabka nadiifka ah (Class3'100)
◆ 2 Qolalka sifeeynta ee qeexaya
◆ Qalabka qalajinta (GMP)
◆ Qalabka wax lagu nadiifiyo
◆ Labo qallajiye isku xira (4.5m3, Bir daxal laheyn)